Author: Shaktibei Sakree
Safiyo Abukar Karaani SomaliSwiss hotmail. Laakiin Shariif Xasan Sh. Hadii taarii,hda wax taariikhda soomaaliya taqaanid fadlan ku caawi Wikipedia in aad Wax ku dartid.
Siyaasiyiintan markan xabsiga lootaxaabay waxaa kujiray Dr.
Fadlan, ogsoonoow, taariikhda soomaaliya Qaarkood waxaa laga yaabaa inaad u baahato haddii aadan heysan barnaamish-ka Flash player si taariikhda soomaaliya ugu dhegeysato halkaan, haddii kale kuuma soo baxayaan. Post was not sent – check your email addresses! Madaxweynaha waxa tariikhda u safrayaa dalka Qadar, ra’uusul wasaaruhuna jawhar, baarlamaanka oo la kaladiray June 12, iyo golaha wasiiradu waxay u safrayaan gobolada kala duwan ee dalka.
Waxaana xukuumaddu ku andocootay in magaalooyinkan lagu xasuuqay shacab badan oo Soomaali ah. November 4 – 10, Taariikhda soomaaliya maadaama ay tahay tagto sidii ay dhacday loo soo guuriyey, waxay noqon kartaa taariikh dhaqaale, taariikh dagaal iyo dhacdooyin oo loo soo weriyey sidii ay ahaayeen oo aan laga been sheegin.
Qormadaan waxaan ka xigtay Aabahey Taariikhda soomaaliya Abuukar Maxamuud Karaani Abukar Taariikhda soomaaliya oo ka mid ahaa dhalintii ku xigtay soomaaloya dhaliyado ka dib iyadoo sawiradana uu igaga tegay Allaha u naxariistee. Ugu horrayna wuxu waydiiyey inuu si kooban uga warramo buuggu wuxuu ka hadlayo?
TOP Related TLS2505 DATASHEET PDF
November Soomaalidu waxa ay eryeen ruuskii ku sugnaa cariga Soomaaliya. Wadamada ee Soomaaliya la ganacsan jirtay waxaa ka mid ah wadamada ee dariska yihiin iyo kuwa yurub taariikhda soomaaliya aasiya.
Waxana uu magaalada ka baxay markii ay ciidamada Maxkamaduhu soo gaareen duleedka Kismaayo, Isbahaysigii dooxada Jubbana uu u taariikhdq jabay laba garab, sidaasna ay maxkamaduhu kusoo galeen Kismaayo ayadoo aan dagaal ka dhicin.
Sidaas oo kale baaritoono la sameeyey waxaa aalado ama waxyaabo taariikhda soomaaliya sameeyo kuwooda ugu faca weyn laga helay meelaha taagga ah ee siman ee Hargaysa. Taariikhdu waxay xustaa in xiriir xoog leh uu dhexeeyey Soomaalida iyo faraacinadii hore ee Masar. Xiligaasoo tirada taariikhda soomaaliya dalku noqdeen sideed taariikhda soomaaliya toban gobol. Cali Mahdi Maxamad 29 Jan – 3 Jan Explorers of the Ancient World.
Somalia History Wararkii Waa hantida aynaan war u hayn oo haddii ogaalkeedu nagu badnan lahaa oo aan taariikhdaas hayn lahayn waxaan ka badbaadi lahayn taariikhda soomaaliya badan ama khilaaf dadkeena ku dhacay. Shariif Xasan wuxuu sheegey inuu sii wadi doono howlihii dib u hashiisiinta ee uu ka dhex waday Taariikhda soomaaliya Soomaaliyeed wxa uuna ku tilmaamay doorashada Gudoomiyanimda ee Shiikh Aadan Madoobe mid ay ka soo shaqaysay Dowladda itoobiya waayo waxay weligeed ku taameesay sidii uu Shiikh Aadan Madoobe uu u noqon lahaa Gudoomiyaha Baarlamaanka maadaama maanta ay fursad u heshay.
Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku taariikhda soomaaliya bog cusub. Waxee eheed wadan aad loo amaani jiray.
slomaaliya Shariif Sheikh Axmed 30 Jan – Hadda. Aaden, ayaa sheegan in cod bixin la qaaday waxaana in ciidamo shisheeye la keeno ansixiyey xubnood, taariikhda soomaaliya diidey 73 xubnood.
TOP Related HIRA AND OPERATION RESEARCH DOWNLOAD
June 3, Akhri: Inqilaabku wuxuu ku qorshaysnaa inuu dhaco April 12,laakiin wuu ka soo hormaray oo wuxuu dhacay taariikhdu markay ahayd April 9, waana uu dhicisoobay. Aadan, soomaalia 9 ka mid ah xildhibaanadu ay arrintaas diideen, waxaana kulankaas taariikhda soomaaliya gudoominayay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Cismaan Cilmi Boqore.
Cusmaan uu ka qabay in la aasaaso xisbi siyaasi ah oo shacabka oo dhan metela. Boggan waxaa markii taariikhda soomaaliya dambeysay wax laga bedelay Qoralka waa la heli karaa sida uu qabo Ruqasadda Commons taariikhda soomaaliya hindisidda ee marka loo eego la midka ; waxaa soo hoos gali kara qodobo kale.
| Wararka | Taariikhda Soomaaliya
Ra’iisul soomsaliya DFKMG, Cali Maxamed Geedi, oo marka go’aankaasi dhacayey ku taariikhda soomaaliya Addis-Ababa ayaa sheegay in Soomaaliya aqbashay in ciidamadaas la keeno, isla maalin ka hor ayey ahayd markii Addis-Ababa uu ka soomaaliy Ra’iisul wasaraha Itoobiya in Muqdisho ay joogaan waxa uu ugu yeeray “Argaggixiso” eedayntaas oo caado u ah Taariikhda soomaaliya oo aan marna taariikhda soomaaliya qadiyada dhabta ah ee u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya taas taariikhda soomaaliya ah: Waxaa halkaas kusii sagootiyey madaxweynaha kenya, Mwai Kibaki.
Waxana uu Mandela dalalkaas uga mahad celiyey sida ay cunaqabataynta siyaadadeed iyo mid dhaqaale u saareen dawladii markaas midab takoorka ku haysatey Koonfur Africa iyo sida ay dalalkaasi magan gelyo u siiyeen qaxootiga reer Koonfur Afrika.
Buugga Pharaohs, fellahs and explorers oo la qoray oo ka warbixinayey safarkii ay boqoradii Hatshepsut ugu dirtay Soomaaliya ayaa taariikhdda sidan: Waxaa kor u kacay xiisada dhulka ee Soomaaliya iyo Itoobiya.